Resipeo pasta tsotra 27 afaka mahay rehetra - Sakafo
Dia Singam-Bolo Fitness Fahasalamana Celeb Style Hoditra Gynaec Haingo Celeb Look Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy
Resipeo pasta tsotra 27 afaka mahay rehetra
Tsy mila akora an-tapitrisany ny manao sakafo mahatalanjona. Aza mino anay? Ireto misy fomba fanamboarana paty tsotra 27 vita amin'ny legioma mahazatra sy vata fampangatsiahana ary pantry, tonga lafatra ho an'ny vao manomboka na ny manam-pahaizana. Mandehana izao, tompony chef.
Mifandraika: Ireto sakafom-pasety 17 Low-Carb Pasta dia eo amin'ny sakafonao
Ity klasika italiana ity dia ny famaritana ny mora atao. Dibera, fromazy, paty ary sakay vao-vao.
Raiso ny Recipe
2. Paty voasarimakirana 15-Minitra iray-Pot iray
Ity limon-paty 15-minitra iray ity dia toy ny sakafo hariva any am-paosinao any aoriana: azo inoana fa efa manana ny ankamaroan'ny akora ao an-dakozia ianao, ary tafaraka ao anatin'ny fotoana fohy.
3. Bucatini Amatriciana
Tieghan Gerard avy amin'ny Half Baked Harvest dia nanao izany indray. Eto izy dia mitondra combo voatabia mahafinaritra, rosemary, ary bacon mifoka.
4. Spaghetti Alla Carbonara
Inona izany fofona matsiro izany? Tsy ny trattoria any ambany rihana… fa ny lakoziananao. Heidi Larsen's spaghetti alla carbonara nentim-paharazana dia mendrika hatao ho an'ny fofona manitra irery.
5. Skillet Pasta miaraka amin'ny Squash fahavaratra, Ricotta ary Basil
Aroso miaraka amin'ity kalesy fahavaratra, ricotta ary basilety ity ity paty am-bolo ity. Ny tsara indrindra dia vonona amin'ny antsasak'adiny ity sakafo iray lovia ity.
fanazaran-tena hanary ny tavy kibo
6. Pasta Florentine miaraka amin'ny akoho voatono
Tianao ny akoho. Tianao ny paty. Maninona raha atambatra ao anatin'ity paty mamy sy feno setroka ary mahafinaritra ity miaraka amin'ny akoho voatono?
7. Salady broccoli natsatsika sy Salady Pasta Salady
Broccoli natsatsika, bacon crispy ary paty mahavoky no mahatonga salady helluva iray. Atolory ho lovia na lovia lehibe — antsoinao.
Sira sy Rivotra
8. Mezzi Paccheri Pasta miaraka amin'ny Burrata Cream, Gu financiale ary Saffron
Ny crème burrata an'i Aida Mollenkamp sy ny pasta gu financiale dia nahazo aingam-panahy tamin'ny fitsangatsanganana tany an-tampon'ny havoana Tuscan, Castelfalfi. (Tadiavo fotsiny ho toy ny anao ny tantara.)
9. Cheesy Kale Farfalle Pasta
Kale, voasarimakirana ary fromazy pecorino dia tampon-tsakafo mahatsikaiky mampihomehy ho an'ny paty tsotra. (Ho ao amin'ity zaza ity koa ny ankizy.)
Ilay sahaza ankehitriny
10. Stovetop Mac sy fromazy efatra-engredient
Manalavitra ilay boaty manga. Ianao irery no mila efatra i mpamadika hikapohana makaroni sy fromazy anao manokana.
Ny fanampiana feno
11. Mora Mushroom Sosy Vegan Mora
Tsy mila vata fampangatsiahana feno fangaro vegan ianao mba hanaovana paty mahaliana ny zanak'olombelona. Case in point: G ena Hamshaw ny sosy vegan misy singa dimy sy paty holatra misy saosy marinara.
Paiso roa sy ny podiny
12. Salady Pesto Pasta
Teny telo: baolina fromazy kely. Tianay ny fofon'ny tsiro ao amin'ny salady pesto pasta an'i Maria Lichty izay misy mozzarella, voatabia serizy ary basilika vaovao.
13. Squash Butternut misy akora dimy, enina sy fromazy fromazy
Ny voanjo kesika mangatsiaka dia mametaka an'ity paty varimbazaha mamy sy mamy ity izay mitovy tsara amin'ny lovia fisakafoanao toy ny eo amin'ny latabatrao hisakafo atoandro ny ampitso tolakandro.
Mifandraika: 14 Pasta malala-jaza no manamboatra ny fianakaviana manontolo
14. Lemon 15-Minitra Broccolini Pasta
Izy io dia tsara tarehy ampy hanompo amin'ny sakafon'ny fisakafoanana manaraka, nefa tsy dia mendrika loatra ho an'ny kiddos.
Fialamboly aingam-panahy / The Geek ao an-trano's Sakafo mora atao
15. Voamadinika Basil Pasta iray
Ny ampahany tsara indrindra (mihoatra ny fananana vilany iray monja mba diovina)? Raha vantany vao voafehinao ity kinova ity dia azonao atao ny manamboatra ny fomba fahandro amin'ny atin'ny fonao.
Colin vidiny / pitipoà roa & ny bokin-tsakafo pod
16. Pasta Cheese Cheese miaraka amin'ny spinach sy Artichokes
Ity paty fromazy osy ity dia voatery ho voadona, ary raha manontany tena ianao dia maharitra 25 minitra vao vita.
17. Salady Salami, Artichoke ary Ricotta Pasta
Ny tsiro italianina vitsivitsy mahazatra dia miaraka miaraka amin'ny lovia tsotra nefa mahafa-po.
18. Spaghetti miaraka amin'ny saosy Pasta Avocado
Io fomba fahandro io dia manankarena nefa feno hatsaram-panahy tanteraka, ary ny sakafo manontolo dia maharitra 30 minitra vao omanina. (Cue mihira anjely.)
19. Akoho voatavo iray voatavo Alfredo
Araka ny fomban-drazana dia mahandro ny paty sy saosy amin'ny lapoely roa farafahakeliny ianao, saingy amin'ity resipeo 35 minitra ity dia miangona ao anaty vilany tokana ny zava-drehetra.
20. Salady aviavy sy voanjo mena
Hitanay vetivety fa ny pasta sy ny zavokà dia natao hiaraka.
21. Havoana sy sakamalao Pasta
Tsy mila midika ora an-dakozia ny stew. Ity resipeo ity dia miaraka ao anatin'ny 30 minitra eo ho eo, ka mahatonga azy io ho foto-tsakafo mora.
22. Mametaka voatabia
Kapohy ny kilasika italiana haingana izay toa manja, fa tena spaghetti misy saosy voatabia fotsiny.
23. Pappardelle katsaka mamy
Tsy mihinana vegan foana izahay, fa bonus mahafaly izany rehefa lovia mamy sy mahafinaritra no miorina amin'ny zavamaniry.
24. Pasta Alla Norma
Ny tsara indrindra dia afaka manao servisy efatra ianao amin'ny $ 10 latsaky ny 10. Salut!
25. Salady Butasyut Squash sy Salady Kosy
Ity fomba fahandro ity dia manambatra ny tsiron'ny fianjerantsika rehetra (mmm ... butternut squash). Izahay dia mahatsapa fa hataonao mandritra ny vanim-potoana rehetra izany.
26. Carbonara katsaka
Alao sary an-tsaina ny lovia paty iray izay mamy mamy, nefa tsy mavesatra.
27. Mora Mofomamy Pizza Pasta Bake
Matsiro toy ny pizza, fa miaraka amin'ny legioma mangatsiaka na tofu feta nanampy, tena mahasalama izy io.
Sokajy Iraisam-Pirenena Tsy Maintsy Jerena Asa Sy Vola
Tsy Maintsy Jerena
Drafitra Sy Torohevitra
ny fomba fanesorana volo saoka maharitra ao an-trano
isan-karazany ho an'ny vehivavy bolo
rantsan sakafo ho an'ny ankizy
tabilao momba ny sakafo hahazoana lanja
tantaram-pitiavana tsara indrindra horonan-tsary amin'ny teny Anglisy
yoga mandroso dia mametraka sary